Imaaraadka iyo KENYA ma ka dhab baa heshiisku mise dhagar hor leh ayay wadaan?! (Maraykanka oo ku baraarugey fowdada Imaaraadka) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Imaaraadka iyo KENYA ma ka dhab baa heshiisku mise dhagar hor leh...
Imaaraadka iyo KENYA ma ka dhab baa heshiisku mise dhagar hor leh ayay wadaan?! (Maraykanka oo ku baraarugey fowdada Imaaraadka)
(Muqdisho) 12 Dis 2019 – Toddobaadkii dhawaa, waxaa Muqdisha laga furay machad lagu tababbarayo diblomaasiyiinta Soomaaliya oo ay maalgelisay dowladda Qadar. Diblomaasiyiintaas waxay ka faa’iideysan doonaan waxbarasho heer sare ah oo ay u fidin doonto hay’adda “Folke Bernadotte Academy – FBA” oo ah haya’ad ay dowladda Sweden u abuurtay Nabadda, Amniga iyo Horumarka kana tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sweden.
Aragtidaas waxaa barbar yaal mid ka duwan oo ku doodaysa in Imaaraadku uu dareemay in Boqortooyda Sacuudiga, oo ay ku kala fogaadeen dagaalkii Yemen, ay diyaar u tahay inay is afgarad cusub la yeelato Qadar oo sababi kara dibuheshiisiin. Inkastoo Sacuudiga sheegay in dalalka isbahaysata ay raali ka wada yihiin dadaallada, haddana haddii heshiis la gaaro Abu Dhabi la’aanteed, waxaa dhici doonto in qoorshaha Imaaraadka ee Soomaaliya uu meel cidla ah ku soo dhaco.
Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in isbahaysiga khaliijka oo weligiiba taageeri jiray nidaamyada kelitaliska ah uguna dambeyay Al-Bashirkii Sudan, aysan fahmin xowliga mawjadaha isbeddel doonka ah ee ka dhacaya gobolka Geeska Afrika.
Amiirrada Carbeed, gaar ahaan kuwa Imaaraadka waxay ka ilduufeen in ay siyaasadda Washington ee Geeska Afrika si lixaad leh isku beddeshay, dadaalka xasilinta gobolkana ay gadaal ka wadaan diblomaasiyiin Mareykan ah. Abu Dhabi waxaa Sudan ka raacay jac diblomaasiyadeed oo aaney ka filaneyn Washington, xilli ay maleynaysay in hawlgalkoodu raali laga yahay, haysataane dhegta Aqalka Cad ee Maraykanka.
Si kastaba ha ahaate, waxaa jawaab loo la’yahay su’aasha ah: Imaaraadka iyo Kenya ma dhagar hor leh ayay maleegayaan mise suluxu waa ka dhab?
Previous article”Waxaan wataa gaarigayga, waxaana marayaa wadada Maka Al Mukarama!” – Kaddib maxaa na dhex maray aniga & ASKARI ma nexe ah?!!
Next articleDABIN KALE: Fannaan BK oo taageero u muujiyay CUNSURI wayn! (Daawo)